WELCOME TO PHYOWAITUN'S BLOG
MY BIRTHDAY IS 1.6.1989.
Php ကို Install လုပ်ခြင်း။
ဤ ဆောင်းပါး မှာ Php run နိုင် တဲ့ web sever တစ် ခု ကို သင် ၏ computer တွင် install လုပ် နည်း ကို ဖေါ်ပြ သွား ပါမည်။
စတင် လေ့ လာ သူ များ အတွက် အလွယ် ကူ ဆုံး က EasyPhp ကို သုံး ရုံ ပါ ပဲ။ ဘာ မှ မလုပ် ခင် EasyPhp ကို ဒီ [link] မှာ download လုပ် ပါ။
EasyPhp ဆို တာ တွဲဖက် အလုပ် လုပ် ရ တဲ့ Software ၄ ခု ကို Install လုပ် ရ လွယ် အောင် စုထား တဲ့ package တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ Software ၄ ခု ကို folder တစ် ခု ထဲ မှာ install လုပ် ပေး ပြီး လိုအပ် တဲ့ configuration ပါ လုပ် ပေး ပါ တယ်။ (လူ က နည်း နည်း တော့ setting လုပ်ရ ပါ တယ်)
EasyPhp မ ပေါ် မှီ က အခက် အခဲ များ။
ယခင် က ဒီ Software ၄ ခု ကို သီး ခြား စီ install လုပ် ရ ပါ တယ်။ နောက် ဒီ ၄ ခု တွဲ အ လုပ်လုပ် နှိုင် အောင် ခက်ခက် ခဲခဲ configuration လုပ် ရ ပါ တယ်။
ဒီ ဆောင်းပါး မှာ EasyPhp ကို download လုပ် ပြီး windows 9x/ ME/ XP ကို အ ပေါ်မှာ install လုပ် နည်း အဆင့် ဆင့် ကို ရှင်း ပြ ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
EasyPhp v1.8 package မှာ ပါဝင် သော Software များ။
Php programming language V4.3.10
Apache Web Server V1.3.33
MySql Database System V4.1.9
Php MyAdmin Database GUI interface V2.6.1
Installer က ပြင်သစ် ဘာသာ နဲ့ ဖြစ် လို့ မြန်မာ များ အတွက် ခက်ခဲ ရှိနှိုင် ပါ တယ်။ ဒါပေ မဲ့ မှန်းဆ လို့ လွယ်ကူ ပါ တယ်။ ဒီ ဆောင်း ပါး က လည်း ရှင်း ပြပေး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Install လုပ် ရန် ပြင်ဆင် ခြင်း။
Easy Php ကို download လုပ် ပါ။
ပိတ် လို့ ရ တဲ့ application အားလုံး ကို ပိတ် လိုက် ပါ။
C drive မှာ 60 meg လောက် free space ရှိ အောင် ရှင်း ထား ပါ။
Install လုပ် ပုံ အဆင့်ဆင့်။
၁ ။ Download လုပ် ထား တဲ့ easyphp1-8_setup.exe ကို ဒီပုံ မျိုး တွေ ပါ မည်။
<== ၎င်း ကို click လုပ် ပါ။
၂ ။ Default language ရွေး ရ မည်။
<== Default English, Ok ကို Click လုပ် ပါ။
၃ ။ Welcome Screen တက်လာ မည်။
<== Next ကို Click လုပ် ပါ။
၄ ။ License agreement form တက်လာ မည်။
<== I agree ကို ရွေး ပါ။ Next ကို click လုပ် ပါ။
၅ ။ Warning Screen တက် လာ မည်။
<== သေချာ စွာ ဖတ် ပြီး Next ကို Click လုပ် ပါ။
၆ ။ Select install directory တက်လာ မည်။
Default C:\_Program file\_Easy Php-8 ဖြစ် ပါ သည် ဘာ မှ မပြင် ဘဲ Next ကို click လုပ် ပါ။
၇ ။ Name of Start menu တက်လာ ပါ မည်။
<== ဘာ မှ မပြင် ဘဲ next ကို check လုပ် ပါ။
၈ ။ Confirm Setting form တက်လာ မည်။
<== install ကို click လုပ် ပါ။
၉ ။ Installation လုပ် နေစဉ် ပြီး အောင် ခေတ္တ စောင့် ပါ၊ မပြီး မချင်း ဘာ ကိုမှ မလုပ်မိ ပါ စေ နှင့်။
၁၀ ။ အားလုံး ပြီး သွား ပါ ပြီ။
<== Finish ကို click လုပ် ပါ။
Installation က တော့ ပြီးသွား ပါ ပြီ။
Posted by phyowaitun at 2:15 AM
April 5, 2008 at 2:19 PM
Myanmar Popular Actors,Actress and Singers Links
www.kophyowaitun.blogspot.com www.kophyowaitun.blogspot.com www.kophyowaitun.blogspot.com I am Phyo Wai Tun,asecond year(CS) student of UCSM.My birthday is 1.6.1989.So,I am 18 years and2months old.I live in Mandalay,Myanmar. I am5feet and7inches tall with short black hair and black eyes.I have got glasses.I think I am practical, kind and good with people.I am very instrested in programming.Thus,I want to beasuccessful, clever and outstanding Web Developer & Software Programmer.I like surfing internet,reading books,listening musics and travel with my friends.I also like sports,expecially football.My favourite football team is Man-U.
If you want to advice,instruct and ask me about this blog,please contact me.My e-mail is phyowaitun2008@gmail.com .I'm very glad you're here with us.I'm warm welcome everytime.I wish you every happiness.
phyowaitun2008@gmail.com phyowaitun2008@gmail.com phyowaitun2008@gmail.com
Zaw Moe Aung
Zaw Myo Aung
Free Source Code and Tutorials
VB.NET Database Component
VB.NET Source Code and Tutorials
Easy Learn JAVA
FREE DOWNLOAD JAVA SOFTWARE
Learning JAVA server pages
MY UNIVERSITY PHOTO
WEBSITES FOR CHECKING GMAIL
Php ကို Install လုပ်ခြင်း။ ဤ ဆောင်းပါး မှာ Php ru...